मैले चारवटी श्रीमती बिहे गर्‍यो, मार्‍यो भन्ने कुराले उनी तनावमा छिन् : प्रधानन्यायाधीश पराजुली – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, पुष २७, २०७४१३:२४2
काठमाडौं, २७ पुस । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डिनमा डा.शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विवादमा आए । सोही विषयलाई लिएर डा.गोविन्द केसीले चौधौं अनशन सुरु गरे । शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि केसी पराजुलीविरुद्ध उत्रिए । उनले प्रधानन्यायाधीशलाई भ्रष्टसमेत भने । त्यसलगत्तै पराजुलीकै निर्देशनमा केसीलाई अनशनस्थलबाटै पक्राउ गरी सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिई साधारण तारेखमा छोडिएको छ ।
आईओएमको डिन पुनर्बहाली घटनाले तीन दिन मुलुकको पूरै राजनीति तरल अवस्थामा पुग्यो । केसीलाई अदालतको अवहेलना गरेर सजाय सुनाउने प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको चाहनामा तुषारापात लागेको छ । अहिले सर्वोच्चले पराजुलीकै शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । यो घटनाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई नैतिक संकट परेको छ ।
आफैंमाथि छानबिन हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीशकै कुर्सीमा बसेर न्यायिक कामकारबाही अघि बढाउने कि राजीनामा दिने ? भन्ने उनले निर्णय गरिसकेका छैनन् । यही सेरोफेरोमा बिहीबार बिहानै मिडिया एनपीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग कुराकानी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा कुनै तनाव र चिन्ता थिएन । उनले डा.केसीले आफूविरुद्ध लगाएको आरोपको जवाफ यसरी दिए ।
सात अर्ब खर्च गरे पनि मलाई झुकाउन सक्दैनन्, म निर्दोष छु
म ढुक्क छु । किनकि मैले गल्ती गरेको छैन । बरु मेरी श्रीमती तनावमा छिन् । चारवटी श्रीमती बिहे गर्‍यो, मार्‍यो भन्ने अनेक खालका कुराका कारण उनी तनावमा छिन् । हुँदै नभएका कुरा गर्ने ?
मिडियाले पनि सत्य के हो भनेर खोज्नुपर्छ । जे लाग्यो त्यो लेख्ने छुट मिडियालाई पनि छैन । सत्य खोजौं न ? यही अवस्था रहे केही समयपछि मानिसलाई मिडियासँग एलर्जी लाग्ने छ । मिडियामा भाइरस पसेको छ ।
मिडिया र न्यायलय एक अर्काका परिपूरक हुन् । दुवैले सत्यताको खोजी गर्छन् । प्रमाणित नभई कसैलाई चोर, भ्रष्ट, माफिया भन्न मिल्छ ? म कसरी माफिया भएँ ? मैले के भ्रष्टाचार गरेको छु ? मलाई डन भनिएको छ, म कसरी डन भएँ ? म गुण्डा हुँ ? मैले मान्छे कुट्दै हिँडेको छ ?
गोविन्द केसीको अनुत्तरदायीपन विस्तारै समाजले बुझ्ने छ । प्रमाणित नहुने आरोप लगाउन हुँदैन । शशि शर्मालाई सरकारले विधिवत् नियुक्त गर्‍याे । केसीले अनसन थालेर स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदा उनको प्राण रक्षाका लागि सरकारले शशिको पद खोसिदियो । कसैले मान्छे मार्दा त उसलाई नसोधी सजाय गर्न मिल्दैन भने, एकपटक शशिलाई सोध्नुपथ्र्यो कि पर्दैन थियो ?
सरकारले २०४९ सालमा ६ हजार कर्मचारी खारेज ग¥यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए प्रधानमन्त्री । अदातल जाने सबै कर्मचारी पुनस्र्थापित भए । यो फैसला सातजना न्यायाधीशले गरेका हुन् । अब केसीले भन्न पर्‍यो, गोपाल पराजुलीभन्दा अघिका यस्ता फैसला गर्ने न्यायाधीश पनि माफिया हुन् । अहिले त व्यक्तिलाई देखाएर न्यायललयलाई कमजोर पार्न खोजिएको छ ।
2 thoughts on “मैले चारवटी श्रीमती बिहे गर्‍यो, मार्‍यो भन्ने कुराले उनी तनावमा छिन् : प्रधानन्यायाधीश पराजुली”
BR Gautam says:
2018-01-11 at 5:40 pm
तपाईं को स्पस्टिकरण हेर्दा होकिजस्तो देखिनेगरी प्रस्तुत गरेको देखिन्छ तर हालसालै तपाइले गरेको फैसालाहरु ncel को कर मिनाहा गर्ने निर्णय, अरबौ राजस्व नियमावलि को आड र शक्ति केन्द्रको मिलोमतोमा लूट मचाउने चुडामणि शर्मालाई बचाउने र आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा खड्का जस्ता भ्रष्ट
र देशद्रोहिलाइ सफाइ दिलाउने गरि निर्णय गर्ने तपाईं जस्ता भ्रष्टाचारको नाइके, माफिया को मतियार र देश द्रोहिलाइ झुंडयाएर फासि दिनु सबैभन्दा ठुलो न्याय हुनेछ ।तपाईं नेपाल आमा को लागि बोझ भैसक्यो ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको “लाइसेन्स”को आवेदन खुल्दै ! छपाई प्रक्रिया तिब्र गतिमा